I-Top 10 e-Best Oldies ye-1960
Olu luhlu luqulunqwe yimithombo eyahlukileyo-izithuba zetshathi, amanani athengisayo ukususela ngexesha lokukhutshwa kuze kube namhlanje, ukuma okubalulekileyo, kunye nokubaluleka kwembali. Kuphela ama-45 engama-rpm angabonakali ahamba phambili kwi-pop Top 40 ngo-1960 afanelekileyo; abaculi bavunyelwa kuphela ukungena omnye ngonyaka ukwenzela ukuba banike umbono olinganiselayo ngeendawo zenkcubeko.
URay Charles, "iGeorgie Engqondweni Yam"
UGianni Ferrari / Umxhasi / i-Getty Izithombe
I-ABC-Paramount 10135 (ngoSeptemba 1960) b / w "Undibuyisele kwiNtombikazi endala"
libhaliswe ngo-25 Matshi 1960, eNew York, NY
Hayi, ayidangali. Enyanisweni, akukho nto yangaphambili yokuthetha ngayo. Kodwa ukuba ucinga ngeDwala kunye ne-Roll njenge-Americana, oku kukuthi-umxube we-blues, umphefumlo, i-jazz, kunye ne-pop ekwazi ukuqonda kuphela ukuba uhlala kwingqondo kaMfoweth 'uRay kodwa inokuyithandwa kalula ngumntu. Umqhubi kaRay waphakamisa ukuba unqumle umgangatho weHoagy Carmichael kuba wayengenakuyeka ukucula.
UBhartt Strong, "Imali (Yilokho Ndiyifunayo)"
U-Anna 1111 (ngo-Novemba 1959) b / w "Owu Ndixolise"
kubhalwe ngoAgasti 1959, Detroit, MI
U-Berry Gordy uza kuba nomthengisi wakhe wokuqala kwi-'60 (iMimangaliso 'Yithengile'), kodwa le 45 ihlangene ngakumbi, njengokuba kufutshane neengqungquthela njengomculo wep pop oye wafumana kunye neyelp yentlungu ngqo ukusuka kwi-underclass. Intshwenkwe yintombazana endiyithandayo kodwa ngenxa yokuphuthuma phambili komculo kunye nokuphelelwa yincongo kaBarrett. UGordy kunye noMoto waseMotown akazange abhale iR Kodwa ke, ngubani na?
UMaurice Williams kunye neZodiacs, "Hlalani"
Herald 552 (Oktobha 1960) b / w "Ngaba Ukholelwa"
yabhalwa ngoJulayi 1960, eNew York, NY
Indlela ebhaliweyo e-'53 ngumqambi we "Little Darlin", oku kwaba ngenye yezinto ezigqithisiweyo kwi-doo-wop ye-Golden Era yosuku lokugqibela; ukuba itywina isicatshulwa, kungenxa yokuba umvelisi wayefuna ukuba ilizwi lifakwe ngale ndlela ukuze uJoe Umyinge adibanise kwisitalato. Kwaye kwenzeka oko. Imiba inokuncediswa ngobude obucatshulwayo (1:36), njengoko le nto ihlala yincinci kunazo zonke.
The Drifters, "Gcina Umdaniso Wokugqibela Kwam"
I-Atlantic 2071 (ngo-Agasti 1959) b / w "Akukho mntu ke mna"
yabhalwa ngo-19 Meyi 1960, eNew York, NY
Emva kokuqulunqa uhlobo lohlobo lwe "59's" Kukho umntwana wam, "i-Drifters kunye neLieber / Stoller baya phambili ukugqibelela yabo inhle, umphefumlo we-Nuyorican-tinged tenement ne-cha-cha, kodwa i-ode ukukhwela ixesha. Oku kwenzeka nokuba yiseshoni yokugqibela apho uBen E. King wayeza kucula ngeqela; wayeya kuhlaziya isandi ngakumbi nangakumbi ngokuthi "Yima Ngam" kunye "neSpeyin Harlem."
Amafutha Domino, "Ukuhamba eNew Orleans"
Imperial 5675 (Juni 1960) b / w "Musa ukuza Knockin;"
ibhalwe ngo-23 uEpreli 1960, eNew Orleans, LA
Oontanga bakhe babephantse bonke bawa lixhoba lokugqibela okanye ubunjani babo ubunzima beli nqanaba, kodwa amaFats agcinwe ngokukhawuleza ekugqibeleni ama-singles angama-classic ngokuqhelekileyo. Unako ukuphazamiseka ngamatye kwixesha elingaqhelekanga ("Valley of Tears"), kodwa oku, i-ballad yakhe enyantliziyo, ilungelelaniswe ngokucacileyo kunye neentambo ezibuhlungu zaseLouisana Symphony Orchestra. Ukuhamba okudabukisayo kodwa okunyanisekileyo. NgeZibhalo.
U-Elvis Presley, "Ngaba Unobungqina Bokuhlwa?"
RCA 47-7810 (Novemba 1960) b / w "Ndiyazi"
ibhalwe ngo-4 uEpreli 1960, iNashville, TN
Ukulungiswa kwemigangatho ye-pop kwakuqhelekileyo kwimihla yokuqala yamadwala, kodwa uKumkani wahamba yonke indlela eya ku-1928 kule ngqungquthela. U-Elvis, njengoko wayehlala ehlala, wenza le nto, efuna ukuzithela, egcwele ibhallad eyakhe, epheleleyo ngebhulorho esichukumisayo ekhutshwa njengeShakespeare. Ubukhulu becala lomsebenzi we- Presley wenza "ingoma yesignesha" engacingiyo, kodwa njengomhlobo ozithandayo kunye ne-pin-drop gravitas, oku kusemandleni.
URoy Orbison, "NguLonely kuphela (Yazi indlela Ndivakalelwa ngayo)"
Isikhumbuzo 421 (ngo-Meyi 1960) b / w "Nanku Iza Kufika Ingoma"
ibhalwe ngo-26 Matshi 1960, iNashville, TN
Izwi elikhulu kakhulu leCheck kunye ne-Roll lingena kwixesha lakhe elidala kunye naloo mnye, uguqula yena kumculi olungileyo we-rockabilly kwi-pop-op stylist stylist. Unokuva i-Tex-Mex Roy ifike nayo yonke indlela esuka eWink, TX, kodwa le ngoma ixhala kakhulu kwi-falsetto ephezulu yintliziyo ephosakeleyo. Ngaloo ndlela, ibeka umgangatho, weRoy's career kunye nayo yonke into.
Sam Cooke, "(Yintoni A) Ihlabathi Elimangalisayo)"
Keen82112 (14 uEpreli 1960) b / w "Phakathi kweNavajo Trail"
ibhalwe ngo-2 Matshi 1959, eLos Angeles, CA
Ibhalwe ngokubanzi nguHerb Alpert wegama likaTijuana Brass, eli li-ballad, elifanelekileyo ngokufanelekileyo kwiingelosi zeCooke, linikezela ngumbono oyingqayizivele kubantwana abathintekayo kuyo yonke indawo - akayinto enhle kunye neencwadi, kodwa uyakuthanda nantoni na. Ngomdla okwenkqisayo xa ulangazelela, unelisekile ngokwaneleyo ukushiya amagama emva, le ngoma ibonisa indlela uSam ongcwele onokuzenza ngayo. Isitalente esibaluleke kakhulu kwiminyaka elishumi ezayo.
I-Everly Brothers, "uCathy's Clown"
I-WB 5151 (ngo-Apreli 1960) b / w "Njalo nguwe"
ibhalwe ngo-18 Matshi 1960, iNashville, TN
Umqambi we-Classical "Grand Canyon Suite" uFerde Grofe akuyona indawo yokuqala ocinga ngayo ngokuphefumlelwa komculo wep pop, kodwa apho uDon ufumana khona i-drate-roll kunye nokuqhubela phambili kwezinto ezimbini, okokuqala iWarner Bros . Kwimizuzu elishumi elinesibini kamva wayenoma ingoma, ajika kwaye aphuma e-marade-marqule ukuya kwelinye ilizwe. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
I-Chubby Checker, "I-Twist"
Parkway 811 (Julayi 1960) b / w "Toot"
yabhalwa ngoMeyi 1960, Philadelphia, PA
Kwaye iminyaka yokudansa iqala ngokunyanisekileyo. Okanye, u-Ernest Evans, ofumene i-niche njengeChubby Checker kunye nale fom ye-Hash Ballard kunye ne-Midnighters b-side. Abavelisi abazange benze okungakumbi kwi-original kodwa bakhuphe izikhetho zesikhombisa, kodwa ukuba (kunye nokuxhaswa nguDick Clark) bakha i-bonafide mania eyayiqhuba le nto ibhalisayo efanayo kwiminyaka emibini ezayo kamva. Akukho mntu okwazi ukukwenza oko oko.
Oldies aphezulu ka-1965
Isandi soKwakha seBrill
Iiphambili ze-5 ze-Wakeboards ze-Kids
Funda Ngezikhokelo Nezenzo Zase Rastafari